တပင်တိုင်မြနန်း အကြောင်း သိကောင်းစရာ - Thutazone
တပင်တိုင်မြနန်း အကြောင်း သိကောင်းစရာ
မူရင်းရေးသားသူ နှင့် ဓာတ်ပုံ – ဆရာသက်နိုင်ဦး(မုံရွာတက္ကသိုလ်)
သူငယ်ချင်း Dr.အေးဝင်းကြည် ဖိတ်လို့ တောင်ကြီးဖက်ကို ခဏရောက်ဖြစ်တယ်။ ရှမ်းပြည်လို နေရာ ရောက်ရင် ကျနော် အတွေ့ချင်ဆုံး အပင်ကတော့ တပင်တိုင်မြနန်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လည်းဆိုတော့ ဒီအပင်က ရှမ်းပြည်မှာသာ အများဆုံးပေါက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ ပေပေါင်း ၃၀၀၀ -၄၀၀၀ ကျော်မှာ သဘာဝပေါက်ပင် အဖြစ်ပေါက်သော အပင်လည်းဖြစ်တယ်။
ဒီအပင်ကို ချင်းပြည်ဖက်မှာ တွေ့ခဲ့ဖူးသော်လည်း ရှမ်းပြည်လောက်မပေါပါဘူး၊ အချို့ဆို တပင်​တိုင်​မြနန်းလို့​တောင်​မသိကြဖူး၊ စွတ်စိုထိုင်း မှိုင်းပြီး အေးမြသော ရာသီ ဥတုဟာ တပင်တိုင်မြနန်း ပင်တွေ နှစ်သက်​သော အ​ခြေအ​နေဖြစ်​တယ်​။ ရွာငံဒေသမှာ သဘာဝ အတိုင်း ပွင့် ဖူးနေသော တပင်တိုင် မြနန်း အပင်ကို တွေ့ရတော့ ပျော်လိုက်သည်ဖြစ်ခြင်း။
ပါလာသော ph camera လေးနဲ့ ပုံပေါင်းများစွာ မှတ်တမ်းတင်ဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့ အုပ်စုကို ထမင်းဖိတ်ကြွေးသော ဓနု မိသားစု အိမ်လေးမှာလည်း တပင်တိုင်မြနန်းကို အလှအပင်​ အနေနဲ့ စိုက်ထားကြတယ်။ အစိမ်းအဖြူ အရွက်လေးတွေကြောင့် အလှအပ အနေနဲ့ စိုက်ရင်လည်း သင့်တော်သည့် အပင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူနှစ်သက်တဲ့နေရာမို့လားမသိ ပွင့်နေတာများ အားရစရာပါ။ ဒီအပင်လေးက ရှမ်းပြည် တောင်ပိုင်း သာမက မြောက်ပိုင်းမှာလည်း ပေါက်တယ်လို့သိရပါတယ်။
ရွာငံဒေသ ကတော့ သဘာဝ တောကြီးများရှိနေသေးတော့ အများဆုံးတွေ့နေရဆဲပါ။ ရေပြာအိုင် နားက သစ်ခွ ​ဆိုင်တန်းမှာလည်း တပင်တိုင်မြနန်းဥတွေ ရောင်းချနေတာကို တွေ့ခဲ့ရတယ်။ ဈေးလည်းချိုလှတယ်၊ တဥကို ၅၀၀ ကျပ်သာသာ နဲ့ရောင်းနေတာပါ။ အပင်ပေါက်လေးတွေလည်းရောင်းချပေးတယ်။ ဒီအပင်​က စိုက်ပျိုးရ လွယ်ကူပါတယ်။ ဥ ကနေ ဒါမှ မဟုတ် သက်ရင့် အကိုင်းကနေ ပင်ပိုင်းပွားပြီး စိုက်လို့ ရပါတယ်။ အချို့လည်း ရှမ်းပြည်​ရောက်​ အမှတ်တရ အဖြစ်​ တင်​တိုင်​မြနန်းအပင်​​လေး​တွေ ၀ယ်ယူနေတာ တွေ့ရတယ်။
တပင်တိုင်မြနန်း အပင်၏ သိပ္ပံအမည်က Cissus discolor ဖြစ်ပါတယ်။ မျိုးရင်း Vitaceae ( စပျစ်မျိုးရင်း) ထဲမှာပါပါတယ်။ ယခင်က ဒီအပင်၏ အမည်မှာ Vitis discolor Dolz. အဖြစ် သုံးခဲ့သော်လည်း ယခုအခါမှာတော့ Cissus discolor အဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ဘီဖြစ်သည်။ တပင်တိုင်မြနန်းမှာ အခြား အမည် အဖြူမျိုး အနီမျိုး အနက်မျိုး စသည်​ဖြင့်​ အမျိုးမျိုး ရှိသည်ဟု ဖော်ပြ​ကြသော်လည်း ကျနော်ကတော့ ယခု ဖေါ်ပြသော မျိုးကိုသာ အဓိက ဖေါ်ပြခြင်ပါတယ်။
နံမည်​ကြီးလှ​သော တပင်​တိုင်​မြနန်းပင်​ကို ဘယ်​လိုခွဲခြားကြ မလည်း? အပင်​၏ လက္ခဏာ​တွေက​တော့
တပင်တိုင်မြနန်းအပင်ဟာ နှစ်ရှည်ခံသော နွယ်ပင်တမျိုးသာဖြစ်တယ်။ မြေကြီးထဲမှာ tuber ဥ ရှိပါတယ်။ တပင်လုံးမှာ ဆေးဖက် အ၀င်ဆုံး အပိုင်း က မြေထဲက ဥ သာဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝ ဆေးထုတ်လုပ်ရာမှာ အမြစ် ဥ ကိုသာ အသုံးပြုကြပါတယ်။
​ဆေးဝင်​အပိုင်းကို တူးယူကြရင်း ဒီအပင်​က တဖြည်းဖြည်း ရှားပါးသွားတာ ဖြစ်​တယ်​၊ အရင်​ကဆို ပုပ္ပါး​တောင်​မကြီး​ပေါ်မှာ ​ပေါများစွာ ​တွေ့ခဲ့ရ​သော်​လည်း ယခုအခါ မ​တွေ့ရသ​လောက်​ ရှားပါးသွားပါတယ်​။ စံနစ်​တကျ စိုက်​ပျိုး ပြီး စီးပွားဖြစ်​ ထုတ်​ယူနိုင်​သည့်​ အပင်​လည်းြ​ဖစ်​ပါတယ်​။
Stems ပင်စည်လေးတွေကလည်း ထူးခြားလှတယ်။ လုံးဝန်းမနေ polygonal ဒေါင့် အစင်း လေးတွေပါပါတယ်။ နီညိုရောင်လည်း သန်းလို့နေပါတယ်။ အရည်ရွှမ်းသော ပုံစံရှိနေပါတယ်။ ပင်စည်ကနေ နှာမောင်း tendrils လေးတွေထွက်ပါတယ်။ ထိပ်မှာ ၂ ခွဖြာ bifurcate လို့နေပါတယ်။ တပင်လုံးမှာ အထင်ရှားဆုံးက အရွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ အရွက်များက ရွက်ထီး ရွက်လွှဲ ထွက်တယ်။
သေးငယ်သော stipules ရွက်စွယ် က saccate ပုံစံဖြစ်နေတယ်။ အရွက်ပုံစံက အီလစ်ပုံစံဆန်သော လှံသွားပုံ elliptic-lanceolate ဖြစ်တယ်။ အရောင်က reddish green ဖြစ်တယ် ။ ရွက်သားက ပါးသော membranous လက္ခဏာဖြစ်တယ်။ အရွက်အရင်းက ထိပ်ပြတ်ပုံ truncate ရှိသော်လည်း ရွက်နားမှာ serrate လွှသွားပုံရှိကြတယ်။ အရွက်ပေါ်မှာ အဖြူရောင် အကွက်များဖြင့် အလှဆင်ထားလေ့ရှိတယ်။
ပန်းခိုင် inflorescences က umbel of dichotomous cyme ဖြစ်ပြီး အရွက်ထွက်သော ဖက် နှင့် မျက်နှာခြင်းဆိုင်ထွက်ပါတယ်။ သေးငယ်သော ပန်းလေးတွေက bisexual လိင်စုံ ပြီး actinomorphic လေးချမ်းညီကြတယ်။ လေးအင်္ဂါဆ tetramerous ပန်းလေးတွေဖြစ်ပြီး ပန်းပွင့်ရင် ပုံထဲကလို အောက်ဖက်ကို ငိုက်ပြီး ပွင့်ကြတယ်။ ပွင့်ဖတ်အုံ calyx က minute သေးငယ်ကာ cupliform ပုံစံဖြစ်တယ် ။
ပွင့်ချပ် ၄ ခုပါပြီး ပန်းပွင့်မှသာ အောက်ကို လန်ပြီးနေပါတယ်။ အနားလေးတွေမှာ အနီရောင်စွတ်ပါတယ်။ ၀တ်ဆံဖို ၄ ခုပါပြီး petal ပွင့်ချပ်နှင့် မျက်နှာခြင်းဆိုင်ထွက်တယ် ( ဒီအချက်ဟာ vitaceae ရဲ့ ထင်ရှားသော လက္ခဏာ တခုဖြစ်တယ်) ။ ပန်းအောက်ခြေမှာ ထင်ရှားသော disc တခု ပါတယ်။ အစေ့အိမ် ovary က အမြင့်အစေ့အိမ် ဖြစ်ပြီး အခန်း ၂ ခုပါတယ်။ တခန်းမှာ အစေ့လောင်း ၂ စေ့စီပါတယ်။ ၀တ်မှုံခံ့လေးတွေက ပန်းရောင်သန်းတယ်။ အသီးရင့်မှည့်ရင် dark red အရောင်ကို ပြောင်းပါတယ်။ အတွင်းမှာ အညိုရောင် အစေ့များပါပါတယ်။
တပင်​တိုင်​မြနန်းပင်​ဆိုလျှင်​ တွဲဖက်​သိကြတာက ကင်​ဆာ​ရောဂါဖြစ်​တယ်​၊ အရပ် ထဲမှာ ​ဘာမှန်း​တော့မသိ..ကင်​ဆာ​ပျောက်​​သော အပင်​လို့သာ ​ပြောကြပါတယ်​၊ အပင်​မှာပါ​သော constituents ​တွေက အစွမ်းထက်​လွန်းလို့ ဒီအတိုင်းအသုံးမပြုသင့်​ပါဘူး၊ အလွန်​ အန္တရာယ်​ရှိပါတယ်​၊ နားလည်​ တတ်​ကျွမ်း​သော တိုင်းရင်း​ဆေးသမား​တော်​များ ၏ ညွှန်​ကြားမှုဖြင့်​သာ အသုံးပြုသင့်​ပါတယ်​၊ ​မြေကြီးထဲရ​သောဥကို တိုက်​ရိုက်​ အသုံးမပြုသင့်​ပါဘူး၊ တခါတရံ Fungus ​တွေပါလာနိုင်​ပါတယ်​၊
ကျ​နော်​ကိုယ်​တိုင်​ သမား​တော်​မဟုတ်​ပါ၊ အပင်​ကိုသာ မျိုးခွဲ​ပေး​သော မျိုးခွဲသူ Taxonomist တဦးသာဖြစ်​ပါတယ်​၊ ဒီအပင်​နဲ့ပတ်​သက်​ပြီး မြဝတီ နဲ့ ​ဒေါက်​တာခင်​​မောင်​လွင်​ (Fame) တို့ အ​မေးအ​ဖြေ လုပ်​ထား​သော အပိုင်း​လေးကို ကူးယူပြီး ဗဟုသုတ အလို့ငှါ ထည့်​​ပေးလိုက်​ပါတယ်​ …
Dr.KML: တပင်တိုင်မြနန်းမှာပါတဲ့ Glycoside နဲ့ Flavonoid တွေဟာ အင်မတန်မှ အစွမ်းထွက်ပါတယ်..
(၁) အရေပြားအနာအမျိုးမျိုးကို သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်.. သူ့မှာ Antibiotic action ရှိလို့ မွှေးကျွတ်နာကအစ Carbuncle လို့ခေါ်တဲ့ အနာပဆုပ်မျိုးအထိ သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်.. အနောက်တိုင်းဆေး Antibiotic တွေနဲ့ ကုသလို့မလွယ်ကူတဲ့ ရောဂါပိုးတွေကိုတောင် သေစေနိုင်တာ တွေ့ရပါတယ်.. အရွက်ကိုတော့ အနာတွေအပေါ်မှာ အုပ်ပေးရင်ရောဂါပိုးတွေကို သေစေပြီး အနာကျက်မြန်တာ တွေ့ရပါတယ်.. အမြစ်(ဥ) ကို သွေးလိမ်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ပါးစပ်ကသောက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်..
(၂) သူ့မှာ Antitumor activity ရှိပါတယ်.. အဖုအကျိတ်မျိုးစုံကို ပျောက်ကင်းစေပါတယ်.. အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးတွေရဲ့သားအိမ်မှာဖြစ်တဲ့ Myoma လို့ခေါ်တဲ့ အကျိတ်တွေကို ကုသရာမှာ များစွာထိရောက်ပါတယ်.. အနောက်တိုင်းဆေးပညာအရတော့ သားအိမ်မှာအလုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ ခွဲစိတ်ကုသမှပျောက်ပါတယ်.. ဒါပေမယ့် လောလောဆယ်ခွဲစိတ်ဖို့မလိုသေးရင် သေးသွားအောင် တပင်တိုင်မြနန်းဥကိုစားပြီး ကုသပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်.. သက်ဆိုင်ရာမီးယပ်သားဖွားပါရဂူများနဲ့လဲ ပူးတွဲစမ်းသပ်လျက်ရှိတာ အောင်မြင်လျက်ရှိပါတယ်..
Myoma uterus ဆိုတဲ့ သားအိမ်မှာအလုံးအကြိတ်ဖြစ်တဲ့ရောဂါဟာ အမျိုးသမီးတွေမှာ အင်မတန်မှအဖြစ်များပါတယ်.. တချို့လဲ တစ်ခုဖြစ်တတ်ပြီး တခါတလေမှာ အများအပြားလဲ ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်.. အသက် ၃၀ ကျော်ရင် ဖြစ်ဖို့အလားအလာရှိနေပြီး အသက် ၃၀ ကျော်အမျိုးသမီး ၁၀၀ မှာ ၂၀ ကနေ ၃၀ အထိလောက် ဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်.. အဲလိုဖြစ်ရင် ရာသီမမှန်တာတို့၊ သွေးဆင်းများတာတို့၊ သားအိမ်နေရာက ကိုက်ခဲတာတို့၊ ဆီးသွားလို့ခက်ခဲတာတို့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်..
သူ့အနေနဲ့ ကင်ဆာအကျိတ်မဟုတ်လို့ သိပ်စိုးရိမ်စရာမဟုတ်ပေမယ့် ကြီးလာရင် ဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်.. အသက်ငယ်သေးရင်တော့ သားအိမ်ကိုချန်ပြီး ခွဲစိတ်ကုသရလို့ အသက်ကြီးရင်တော့ သားအိမ်ပါထုတ်ပစ်ပြီး ခွဲစိတ်ကုသရလေ့ရှိပါတယ်..
(၃) နာတာရှည်အစာအိမ်ရောဂါကိုလဲ သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်.. သူ့မှာ အစာအိမ်ရောဂါပိုးဖြစ်တဲ့ H.pylori ကိုသတ်နိုင်တဲ့သတ္တိရှိတဲ့အပြင် အနာကျက်စေတဲ့အာနိသင်ပါရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်..
MWD: ဘက်တီးရီးယားရောဂါပိုးတွေကို ထိရောက်နှိမ်နင်းတယ်ဆိုတော့ ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာအဖြစ်များတဲ့ TB ရောဂါအပေါ်မှာရော ဘယ်လိုများ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသလဲဆိုတာ သိပါရစေ..
Dr.KML: အရင်တုန်းကတော့ တပင်တိုင်မြနန်းဟာ TB ရောဂါပိုးကိုပါ နှိမ်နင်းနိုင်တယ်လို့ ယူဆခဲ့ကြပါတယ်.. ဒါပေမယ့် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနမှာ လေ့လာချက်အရရော ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လေ့လာချက်အရပါ ကြည့်ရင်တော့ TB ပိုးကိုနှိမ်နင်းနိုင်မှု မရှိဘူးဆိုတာ သိရပါတယ်..
အခုဆိုရင်​ တပင်​တိုင်​မြနန်းပင်​ ဆိုတာ ဘယ်​လိုအပင်​လည်းဆိုတာ သိ​လောက်​ပါဘီ ၊ တကယ်​လို့များ ရှမ်းပြည်​ဖက်​​ရောက်​ခဲ့ရင်​ တပင်​တိုင်​မြနန်းအပင်​​လေး​တွေဝယ်​ခဲ့ဖို့ မ​မေ့ပါနဲ့ ..​ဆေးအတွက်​သာမက အလှအပအ​နေနဲ့သာ စိုက်​လို့ရတဲ့ အပင်​​လေး​တွေမို့ပါ…
တပငျတိုငျမွနနျး အကွောငျး သိကောငျးစရာ (unicode)
သူငယျခငျြး Dr.အေးဝငျးကွညျ ဖိတျလို့ တောငျကွီးဖကျကို ခဏရောကျဖွဈတယျ။ ရှမျးပွညျလို နရော ရောကျရငျ ကနြျော အတှခေ့ငျြဆုံး အပငျကတော့ တပငျတိုငျမွနနျးပငျဖွဈပါတယျ။ ဘာ့ကွောငျ့လညျးဆိုတော့ ဒီအပငျက ရှမျးပွညျမှာသာ အမြားဆုံးပေါကျကွလို့ဖွဈတယျ။ ပပေေါငျး ၃၀၀၀ -၄၀၀၀ ကြျောမှာ သဘာဝပေါကျပငျ အဖွဈပေါကျသော အပငျလညျးဖွဈတယျ။
ဒီအပငျကို ခငျြးပွညျဖကျမှာ တှခေဲ့ဖူးသျောလညျး ရှမျးပွညျလောကျမပေါပါဘူး၊ အခြို့ဆို တပငျ​တိုငျ​မွနနျးလို့​တောငျ​မသိကွဖူး၊ စှတျစိုထိုငျး မှိုငျးပွီး အေးမွသော ရာသီ ဥတုဟာ တပငျတိုငျမွနနျး ပငျတှေ နှဈသကျ​သော အ​ခွအေ​နဖွေဈ​တယျ​။ ရှာငံဒသေမှာ သဘာဝ အတိုငျး ပှငျ့ ဖူးနသေော တပငျတိုငျ မွနနျး အပငျကို တှရေ့တော့ ပြျောလိုကျသညျဖွဈခွငျး။
ပါလာသော ph camera လေးနဲ့ ပုံပေါငျးမြားစှာ မှတျတမျးတငျဖွဈတယျ။ ကနြျောတို့ အုပျစုကို ထမငျးဖိတျကွှေးသော ဓနု မိသားစု အိမျလေးမှာလညျး တပငျတိုငျမွနနျးကို အလှအပငျ​ အနနေဲ့ စိုကျထားကွတယျ။ အစိမျးအဖွူ အရှကျလေးတှကွေောငျ့ အလှအပ အနနေဲ့ စိုကျရငျလညျး သငျ့တျောသညျ့ အပငျဖွဈပါတယျ။ သူနှဈသကျတဲ့နရောမို့လားမသိ ပှငျ့နတောမြား အားရစရာပါ။ ဒီအပငျလေးက ရှမျးပွညျ တောငျပိုငျး သာမက မွောကျပိုငျးမှာလညျး ပေါကျတယျလို့သိရပါတယျ။
ရှာငံဒသေ ကတော့ သဘာဝ တောကွီးမြားရှိနသေေးတော့ အမြားဆုံးတှနေ့ရေဆဲပါ။ ရပွောအိုငျ နားက သဈခှ ​ဆိုငျတနျးမှာလညျး တပငျတိုငျမွနနျးဥတှေ ရောငျးခနြတောကို တှခေဲ့ရတယျ။ ဈေးလညျးခြိုလှတယျ၊ တဥကို ၅၀၀ ကပျြသာသာ နဲ့ရောငျးနတောပါ။ အပငျပေါကျလေးတှလေညျးရောငျးခပြေးတယျ။ ဒီအပငျ​က စိုကျပြိုးရ လှယျကူပါတယျ။ ဥ ကနေ ဒါမှ မဟုတျ သကျရငျ့ အကိုငျးကနေ ပငျပိုငျးပှားပွီး စိုကျလို့ ရပါတယျ။ အခြို့လညျး ရှမျးပွညျ​ရောကျ​ အမှတျတရ အဖွဈ​ တငျ​တိုငျ​မွနနျးအပငျ​​လေး​တှေ ဝယျယူနတော တှရေ့တယျ။
တပငျတိုငျမွနနျး အပငျ၏ သိပ်ပံအမညျက Cissus discolor ဖွဈပါတယျ။ မြိုးရငျး Vitaceae ( စပဈြမြိုးရငျး) ထဲမှာပါပါတယျ။ ယခငျက ဒီအပငျ၏ အမညျမှာ Vitis discolor Dolz. အဖွဈ သုံးခဲ့သျောလညျး ယခုအခါမှာတော့ Cissus discolor အဖွဈပွောငျးလဲခဲ့ဘီဖွဈသညျ။ တပငျတိုငျမွနနျးမှာ အခွား အမညျ အဖွူမြိုး အနီမြိုး အနကျမြိုး စသညျ​ဖွငျ့​ အမြိုးမြိုး ရှိသညျဟု ဖျောပွ​ကွသျောလညျး ကနြျောကတော့ ယခု ဖျေါပွသော မြိုးကိုသာ အဓိက ဖျေါပွခွငျပါတယျ။
နံမညျ​ကွီးလှ​သော တပငျ​တိုငျ​မွနနျးပငျ​ကို ဘယျ​လိုခှဲခွားကွ မလညျး? အပငျ​၏ လက်ခဏာ​တှကေ​တော့
​ဆေးဝငျ​အပိုငျးကို တူးယူကွရငျး ဒီအပငျ​က တဖွညျးဖွညျး ရှားပါးသှားတာ ဖွဈ​တယျ​၊ အရငျ​ကဆို ပုပ်ပါး​တောငျ​မကွီး​ပျေါမှာ ​ပေါမြားစှာ ​တှခေဲ့ရ​သျော​လညျး ယခုအခါ မ​တှရေ့သ​လောကျ​ ရှားပါးသှားပါတယျ​။ စံနဈ​တကြ စိုကျ​ပြိုး ပွီး စီးပှားဖွဈ​ ထုတျ​ယူနိုငျ​သညျ့​ အပငျ​လညျးြ​ဖဈ​ပါတယျ​။
တပငျ​တိုငျ​မွနနျးပငျ​ဆိုလြှငျ​ တှဲဖကျ​သိကွတာက ကငျ​ဆာ​ရောဂါဖွဈ​တယျ​၊ အရပျ ထဲမှာ ​ဘာမှနျး​တော့မသိ..ကငျ​ဆာ​ပြောကျ​​သော အပငျ​လို့သာ ​ပွောကွပါတယျ​၊ အပငျ​မှာပါ​သော constituents ​တှကေ အစှမျးထကျ​လှနျးလို့ ဒီအတိုငျးအသုံးမပွုသငျ့​ပါဘူး၊ အလှနျ​ အန်တရာယျ​ရှိပါတယျ​၊ နားလညျ​ တတျ​ကြှမျး​သော တိုငျးရငျး​ဆေးသမား​တျော​မြား ၏ ညှနျ​ကွားမှုဖွငျ့​သာ အသုံးပွုသငျ့​ပါတယျ​၊ ​မွကွေီးထဲရ​သောဥကို တိုကျ​ရိုကျ​ အသုံးမပွုသငျ့​ပါဘူး၊ တခါတရံ Fungus ​တှပေါလာနိုငျ​ပါတယျ​၊
ကြ​နျော​ကိုယျ​တိုငျ​ သမား​တျော​မဟုတျ​ပါ၊ အပငျ​ကိုသာ မြိုးခှဲ​ပေး​သော မြိုးခှဲသူ Taxonomist တဦးသာဖွဈ​ပါတယျ​၊ ဒီအပငျ​နဲ့ပတျ​သကျ​ပွီး မွဝတီ နဲ့ ​ဒေါကျ​တာခငျ​​မောငျ​လှငျ​ (Fame) တို့ အ​မေးအ​ဖွေ လုပျ​ထား​သော အပိုငျး​လေးကို ကူးယူပွီး ဗဟုသုတ အလို့ငှါ ထညျ့​​ပေးလိုကျ​ပါတယျ​ …
🌿 MWD: ဘကျတီးရီးယားရောဂါပိုးတှကေို ထိရောကျနှိမျနငျးတယျဆိုတော့ ကြှနျမတို့နိုငျငံမှာအဖွဈမြားတဲ့ TB ရောဂါအပျေါမှာရော ဘယျလိုမြား အကြိုးသကျရောကျမှုရှိသလဲဆိုတာ သိပါရစေ..
အခုဆိုရငျ​ တပငျ​တိုငျ​မွနနျးပငျ​ ဆိုတာ ဘယျ​လိုအပငျ​လညျးဆိုတာ သိ​လောကျ​ပါဘီ ၊ တကယျ​လို့မြား ရှမျးပွညျ​ဖကျ​​ရောကျ​ခဲ့ရငျ​ တပငျ​တိုငျ​မွနနျးအပငျ​​လေး​တှဝေယျ​ခဲ့ဖို့ မ​မပေ့ါနဲ့ ..​ဆေးအတှကျ​သာမက အလှအပအ​နနေဲ့သာ စိုကျ​လို့ရတဲ့ အပငျ​​လေး​တှမေို့ပါ…
Previous post ဘီလူးတို့အကြောင်း သိကောင်းစရာ
Next post ဆေးထိုး၍ သေဒဏ်စီရင်ခြင်း အကြောင်း